ယခုလူကြိုက်အများဆုံး ခေါ်သူနားဆင် တေးသံစဉ်
1. A Chit Sit Yae Tan Phoe Ver2 - Ma Naw
2. Mulalayphyar - Wai La G Latt Han Htun Tha O(4 Element)
3. A Chit Sit Yae Tan Phoe V3 - Ma Naw
ယခုလူကြိုက်အများဆုံး သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဖျော်ဖြေရေး
1. DIY (Do It Yourself)
3. MyMusic (ရေပန်းစားသီချင်းဝန်ဆောင်မှု)
1. ၅၀၀ ကျပ် Special ကူပွန် ရယူလိုက်ရအောင် - Shwe Pa Lin
2. ၁သိန်းဖိုးနဲ့အထက် Delivery free - Sushi House
3. မိုးရာသီလျှော့ဈေးများ - Asia Uniway
1. ၇ရက်သားသမီး တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း( ၂၇-၅-၂၀၁၈ ) မှ ( ၂-၆-၂၀၁၈)
2. မေလ ၂၇ ရက်နေ့ ၇ရက်သားသမီးဗေဒင်
3. မေလ ၂၇ ရက်နေ့အတွက် ရာသီခွင်အလိုက်ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
ယခုလူကြိုက်အများဆုံး ကိုရီးယား အနုပညာဖျော်ဖြေမှုများ
1. SBS ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ့် အဆိုတော်-သရုပ်ဆောင် Suzy
2. Yoo Jae-suk နှင့် EXO အဖွဲ့တို့၏နှစ်ယောက်တွဲသီချင်း Dancing King ထွက်ရှိတော့မည်။
3. EXO ရဲ့ လေးခွေမြောက်သန်းနဲ့ချီရောင်းချရတဲ့အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်လာတဲ့ ‘The War’
1. ကျာကျူး - Chapter 1
2. အဘိဓာန်၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် - အစ/အဆုံး
3. ဝိုးတဝါး ဘာသာဗေဒ - Chapter 1
1. သုတ်​ရည်​ကိုဘယ်​အချိန်​မျိုးမှာထုပ်​ဖို့ အသင့်​​တော်​ဆုံးလဲ?
2. မိန်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်တတ်တဲ့စိတ်က ယောင်္ကျားလေးတွေထက်ပိုနိုင်လား
ဧရာမ လေယာဉ်တင် သင်္ဘောသစ်ကြီးတစ်စီး တည်ဆောက်ရန် ရုရှားစဉ်းစားနေ
ရုရှားရေတပ်သည် ဧရာမ လေယာဉ်တင် သင်္ဘောကြီးတစ်စီး တည်ဆောက်ရေးကို အလေးအနက် စဉ်းစားနေကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာသည်။
လတ်တလောတွင် တိတိကျကျ တရားဝင် ဆုံးဖြတ် အတည်ပြုမှု မရှိသေးသော်လည်း ရုရှား အနေဖြင့် ရေတပ်အင်အားကို အံ့မခန်း မြှင့်တင်ရန် အစီအစဉ် တစ်ရပ်အနေဖြင့် ၂၀၂၀ ဝန်းကျင်တွင် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောသစ် စီမံကိန်းကို အစပြုနိုင်ရန် မျှော်မှန်းနေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လေယာဉ်တင် သင်္ဘောသည် တန်ချိန် ၁၁၅၀၀၀ မျှထိ လေးလံသော ဧရာမ ရေပေါ်ခံတပ်ကြီး ဖြစ်ဖွယ် ရှိနေသည်။ ရုရှားတွင် လတ်တလော၌ သက်တမ်း ကြာညောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် Admiral Kuznetsov လေယာဉ်တင် သင်္ဘောတစ်စီးသာ ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အမေရိကန်တွင် လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ၁၁ စီးထိ လက်ဝယ် ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
Admiral Kuznetsovသည် တန်ချိန် ၅၅၀၀၀ မျှ လေးလံသည်။ အမေရိကန်က ယခုနှစ်အတွင်း စတင်ရေချခဲ့သည့် USS Gerald R. Ford လေယာဉ်တင်သင်္ဘော၏ အလေးချိန်မှာ တန်ချိန် ၁၀၀၀၀၀ မျှရှိသည်။
ထို့အပြင် ရုရှား၏ ဥရောပပြိုင်ဘက် ဗြိတိန်ကလည်း ခေတ်မီ လေယာဉ်တင် သင်္ဘောသစ်ကြီး နှစ်စီးကို တည်ဆောက်နေပြီ ဖြစ်သည်။
ရုရှား ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ် ဒီမီထရီ ရိုဂိုဇင်က လေယာဉ်တင်သင်္ဘောသစ် တည်ဆောက်ရန် အခြေခံ စိတ်ကူးတစ်ခု ရှိနေကြောင်း Rossiya-24နှင့် အင်တာဗျူးတွင် အရိပ်အမြွက် ပြောကြားခဲ့သည်။ “အရှေ့ဖျားဒေသမှာ သင်္ဘောကျင်း အသစ်တွေ တည်ဆောက်တဲ့အခါ စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်တွေအရ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ တန်ချိန် ၁၁၀၀၀၀ ကနေ ၁၁၅၀၀၀ ထိ ကြီးမားတဲ့ လေယာဉ်တင် သင်္ဘောကြီးတွေပါ ဆောက်လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိလာမှာပါ”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် သင်္ဘောကျင်း အသစ်များတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၌ စတင်၍ လုပ်ငန်း လည်ပတ်လာနိုင်မည်ဟုလည်း ရိုဂိုဇင်က အတည်ပြုခဲ့သည်။
ရုရှား၏ လက်ရှိ တစ်စီးတည်းသော လေယာဉ်တင် သင်္ဘောကြီး Admiral Kuznetsovသည် ဆိုဗီယက်ခေတ် လက်ကျန်ဖြစ်ပြီး SU-33 တိုက်လေယာဉ်များ၊ MiG-29 တိုက်လေယာဉ်များ၊ SU-25 အမောင်းသင် လေယာဉ်များ၊ Kamov မျိုးကွဲ ရဟတ်ယာဉ်များ အပါအဝင် လေယာဉ် ၄၁ စီးထိ တင်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း သိရသည်။
မလေးရှား ဝန်ကြီးချုပ် မဟာသီယာကို နိုဘယ်ဆု ချီးမြှင့်ရန် အွန်လိုင်းမှ လက်မှတ်များ ကောက်ခံကာ တောင်းဆို
လစ်ဗျား စင်ပြိုင်ခေါင်းဆောင်များ ပဲရစ်မြို့တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမည်
ဘရာဇီးတွင် လောင်စာဆီ ပြတ်လပ်နေ၍ ကုန်တင်ယာဉ်မောင်းများ သပိတ်ကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာ ဆေးဝါးများ ပြတ်လပ်နေ
ကိုလံဘီယာ အစိုးရနှင့် ELN သူပုန်တို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲကို သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ ကာလတွင် ရပ်ဆိုင်းထားမည်
Copyright © 2017 MPT. All rights reserved.